बालुवाटारमा ओलीको खाजा खर्च वर्षको ४ करोड ! - Nepal Face
बालुवाटारमा एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दै
बालुवाटार र धुम्बाराहीमा नमिलेको सहमतिलाई म्यारियटले मिलाउला त ?
एमाले एक्सनः सरकारविरुद्ध लागे सिधै कारबाही
एमालेमा खैलाबैला, बालुवाटारमा संसदीय दलको आकस्मिक बैठक सुरु
एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै, स्पष्टीकरण नबुझाउनेलाई कारवाहीको तयारी
प्रधानमन्त्री देउवा आज बूढानिलकण्ठबाट बालुवाटार सर्दै
पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गोप्य रूपमा बालुवाटारले खाजाखर्चबापत ६० लाख भुक्तानी दियो । ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो अवसानपछि आफ्नो पक्षमा उत्रिएका वकिलहरूलाई राज्यकोषबाट आधा करोड भुक्तानी दिने काम भयो । जाँदाजाँदै ओलीले खाजा खर्चमै राज्यको ४ करोड चुना लगाएको हिसाब पनि भेटियो ।
# केपी शर्मा ओली # बालुवाटार
एसएसपी हुँदा केटी काण्डमा डामिएका सौरभ राणा डीआईजीमा बढुवा